Tag: nkwenye email | Martech Zone
Tag: email nkwenye
Nkwado Email na Nyochaa Email
Tọzdee, Septemba 24, 2020 Tọzdee, Septemba 24, 2020 Douglas Karr
Anyị na onye guzobere ikpo okwu email na-eme mkparịta ụka, na steeti ụlọ ọrụ email na-eme ka ọ dị ọcha. Ọ bụrụ n'ịga na njikọ ahụ, ị ​​ga - ahụ ọtụtụ ndị egwuregwu n'ahịa - ọtụtụ n'ime anyị nwalere ma jiri ndị ahịa anyị. Anyị mebere mmekọrịta anyị na Neverbounce (nke bụzi onye na-akwado blog) n'ihi na sistemụ ha rụrụ ọrụ pụrụ iche nke nyochaa ndepụta akwụkwọ akụkọ anyị na nke anyị.
Marketingre ahịa email abụrụla ụzọ ndị ahịa na-esi enweta ndị ahịa nwere ike ịbụ ebe ndị ahịa ahụ nabatara ebe niile na 1990s. Ọbụna na ịmepụta usoro ọhụụ dịka mgbasa ozi mmekọrịta, mmetụta, na ịre ahịa ọdịnaya, a ka na-ele email anya dị ka nke kachasị dị ka nyocha nke ndị ahịa 1,800 nke Smart Insights na GetResponse duziri. Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na usoro ịre ahịa email adịghị agbanwe agbanwe na teknụzụ ọhụụ. Site na mgbasa ozi mmekọrịta enwere ugbu a
Satọde, 23 Juun 2018 Douglas Karr
Dịka onye na-azụ ahịa, ọ nweghị ihe ọ bụla na-akụda mmụọ ma na-ewe oge karịa ịnwe data na-agagharị na nsogbu metụtara data iguzosi ike n'ezi ihe. Ndaba nwere ọrụ ọrụ ngwanrọ na ngwọta nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịmata ebe ha kwụ na data ha na nyocha na-aga n'ihu, mkpu, yana ngwaọrụ iji dozie nsogbu data. Ruo ihe karịrị afọ iri, ọtụtụ iri puku ndị nchịkwa n'ihe karịrị mba 20 gafee ụwa tụkwasịrị obi Ndaba iji nwetaghachi iguzosi ike n'ezi ihe na CRM ha
Ebumnuche asaa iji mee ka aha Email gị dị ọcha na otu esi kpochapụ ndị debanyere aha
Monday, March 19, 2018 Tọzdee, Septemba 24, 2020 Douglas Karr
Anyị na-elekwasị anya na ahịa email n'oge na-adịbeghị anya n'ihi na anyị na-ahụ ọtụtụ nsogbu na ụlọ ọrụ a. Ọ bụrụ na ndị isi na-aga n'ihu na-atụ gị ụjọ na listi email gị, ị kwesịrị igosi ha n'isiokwu a. Nke bụ eziokwu bụ, na ibu na okenye gị email ndepụta, ihe mmebi ọ nwere ike ịbụ na-enwe na gị email ahịa irè. Ikwesiri, kama, itinye uche na ole ndị debanyere aha gị na gị